Huawei agaghị enye Apple chipsets mkpanaka ya 5G | Androidsis
N'oge ikpeazụ, enwere ọtụtụ asịrị na Huawei gwara Apple ka o nye ya 5G ibe (Balong 5000). Iji nye ha nri, onye isi Huawei gara n'ihu kwuo nke ahụ ọ bụ onye oghe ịre ere na nnukwu Cupertino. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ mechara were ọnọdụ gọọmentị.
Taa, na Nzukọ Huawei Analyst Summit 2019, ụlọ ọrụ chịrị nke a, na-egosi na ọ gwabeghị ụlọ ọrụ America iji nye ya 5G chipsets.
Mgbe a na-aza ajụjụ na azịza na ihe omume ahụ, a jụrụ Huawei ma ọ bụrụ na enwere ntụkwasị obi na asịrị ahụ banyere ntinye nke 5G nke Huawei maka ọgbọ na-esote. Nke a bụ nzaghachi gọọmentị nke ụlọ ọrụ ahụ:
"Anyị enweghị mgbanwe na atụmatụ chipset anyị, ma ọ bụ nkwukọrịta n'etiti anyị na Apple gbasara ihe ngosi 5G"
N'ihi nkọwa a, anyị ji n'aka ugbu a Huawei esoghị onye na-eme iPhone okwu, dị ka a na-enyo enyo. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya kpatara ụfọdụ mmadụ ji chee na Huawei bụ ụlọ ọrụ kachasị mma iji nye Apple ibe 5G, ebe nnukwu Cupertino na Qualcomm anọghị na usoro kachasị mma n'oge na-adịbeghị anya. N'ezie, ikpe ọhụụ ya malitere na mbido izu a.
Intel gaara abụ onye na-ere ahịa ezi uche na-esote, mana ụlọ ọrụ ahụ yiri ka ọ ga-anọ ntakịrị oge na mgbaji 5G ya. Nke ahụ na-ahapụ Samsung na Huawei. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ejighị n'aka na Samsung nwere ike ijikwa arụmọrụ 5G. Mgbe ahụ, Huawei bụ nhọrọ kachasị mma.
Huawei Balong 5000, Huawei nke mbụ 5G modem
Ihe a na-atụ anya ya OnePlus 5G ama ama O sitere na modem Qualcomm si X50 5G. Mana Huawei si na foto a, Intel ma ọ bụ Samsung nwere ike ịbịa zọpụta Apple. O di nwute, Apple ka nwere ajuju ikwu okwu n'okwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Okwu ikpeazu: Huawei agaghị enye Apple chipsets 5G ya
Mbadamba nkume kacha mma iji mee ememe ụbọchị nne